Tusiyaha CCI ee Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Modommodity Сhannel Index-faham guri, ka samee lacag isbeddellada
Tusaha CCI (Index Commodity Channel Index) waxaa soo saaray 1980 ganacsade sarrifka Donald Lambert taasoo ka dhalatay falanqeyn ku saabsan isbeddelka badeecadaha iyo xaqiijinta mala awaalka qiimaha meertada. Qalabku waa nooc wanaagsan oo ah sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee suuqyada lacagaha iyo suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency' waxaana lagu daraa aasaaska qalabka farsamada ee dhammaan meheradaha ganacsiga caanka ah.
Malo awaal ku saabsan dabeecadda meertada ah ee suuqa waxay leedahay taariikh dheer; waa ku filan tahay dib u soo celinta aragtida mawjadda Elliott. Lambert, buugiisa Commodity Channel Index oo loo yaqaan 'Cyclical Trend Trading Tool', wuxuu mar kale xaqiijiyey in is bedbedelka sicirku aanu ahayn geeddi-socod fowdo ah oo ay ku xiran yihiin yoolal farsamo iyo aasaasi ah.
Tilmaame-baraha waxaa loo isticmaali karaa hanti kasta wuxuuna siinayaa wax badan oo calaamadaha binariga ah ee guuleysta ee go'aamiya bilowga iyo dhammaadka wareegga, baaxad ahaan iyo waqti ahaanba. Xisaabinta algorithm waxay u maleyneysaa in haddii qiimaha uu ka leexdo celceliska dhaqaajinta waxa loogu yeero "astaamaha" weecashada, waxaan ka hadli karnaa isbeddelka isbeddelka isbeddelka ama bilowga hagaajinta.
CCI wuxuu u shaqeeyaa sida oscillator caadi ah - natiijada xisaabinta waa jaantus muujinaya heerka hadda jira iyo astaamaha meertada suuqa. Ka bixitaanka aagagga ba'an ee + / - 100 waxay ku siinaysaa calaamad muujinaysa inaad u baahan tahay inaad raadiso barta laga soo galo dhinaca ka soo horjeedda isbeddelka hadda socda.
Sida qaaciidooyinka u egyihiin ayaa laga heli karaa buugaagta falanqaynta farsamada, waxaa muhiim ah in la fahmo macnaha heerarka ugu muhiimsan ee calaamadaha ganacsiga xulashada xisaabinta
1. Qiimaha "caadiga ah" ayaa la go'aamiyaa, mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee socodka lacagta. Waa celceliska xisaabta ee imminka Qiimaha Hoose, Dhaw iyo Sare. Haddii qiimaha caadiga ah ee lagu qiyaasay uu ka sarreeyo qiimihii hore, socodka waxaa loo arkaa inuu yahay mid hagaagsan oo suuqa waa inuu koraan, haddii uu ka yar yahay, socodka waa mid taban, CCI-da ayaa hoos u dhacaya, sidoo kale suuqa guud ahaan;
2. Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee qiimaha caadiga ah waa la xisaabiyaa. Sidaa awgeed, isbeddellada kala-baxa ah ayaa laga saaraa oo isbeddellada ayaa si muuqata loo arkaa. Gaar ahaan suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency' ;
3. Midda ku xigta waa leexashada dhexdhexaadka ah (ee suuragalka ah) ee loo yaqaan tirakoobka iyada oo loo weecinayo. Waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo in suuqa uu yahay mid xad dhaaf ah ama xad dhaaf ah;
4. Marxaladda ugu dambeysa, Tusaha Badeecadda Badeecadda ayaa natiijada ku miisaamaya iyadoo lagu dhufanayo 0.015 ama "Lambert joogto ah". Sidaa darteed, 70-80% xogta waxay u dhaxeysaa heerarka +/- 100, taas oo u oggolaan doonta ganacsade binary baabuur ah inuu kala sooco xilliyada fidsan iyo isbeddel la'aan.
Waxaa jira ikhtiyaarro aad ku beddeli karto qiimaha joogtada ah, laakiin weli ma jiraan wax xog ah oo tilmaame kiiskan uu siinayo natiijooyin ka wanaagsan kan saldhigga ah.
Dejinta iyo qaababka qaabeynta
Tilmaamaha CCI, oo ah aaladda caadiga ah ee calaamadaha caanka ah ee dib u eegista binary , ayaa lagu muujiyay daaqad terminal gooni ah. Waxaa jira xariijin dheelitir ah (eber), halbeegga oscillators, iyo laba heer oo xad dhaaf ah iyo xad dhaaf ah: +/- 100 ama +/- 200.
Waqtiga xisaabinta oo sii dheereynaya, isbeddelka yar ee tusaha ayaa ah oo wuxuu siinayaa calaamado lagu kalsoonaan karo. Iyadoo la raacayo, hoos u dhac ku yimaada muddooyinka ayaa jaantuska ka dhigaya mid aad xasaasi u ah "buuqa suuqa" iyo tiro badan oo ah calaamadaha binary been abuur ah, gaar ahaan aagagga ba'an.
Qiimaha muddooyinka calaamadaha ganacsiga ee 'crypto' waa in si gaar ah loogu xusho hanti kasta, iyadoo la tixgelinayo iskucelceliska isbeddelka, waqtiga shaqada, istiraatiijiyad ganacsi (isbooris, ganacsi rogrogmi kara, ganacsi muddo-dhexaad ah ama muddo dheer ah) waxayna kuxirantahay raaxada qaabka ganacsiga ee ganacsadaha.
Sida laga soo xigtay qoraaga, tilmaamuhu waa inuu adeegsadaa qiimaha 1/3 ee wareegga suuqa oo dhan sida halbeegga aasaasiga ah. Tusaale ahaan, haddii celceliska wareegga uu yahay 1 bilood (25-30) maalmood, markaa waa inaad tijaabisaa qiyamka 10-12 xilli. Suuqa dhabta ah iyadoo la adeegsanayo kumbuyuutaro ganacsi oo lagala socdo dhowr kormeerayaal , istiraatiijiyaddan ayaa kaliya si fiican uga shaqeysa suuqa mustaqbalka, halkaasoo taariikhda dhicitaanka loo yaqaan dhamaadka wareegyada maxalliga ah iyo isbeddellada la saadaaliyay.
Lammaanaha lacagta iyo istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo dhexdhexaad ah (waqti go'an oo ka yimaada H4 iyo wixii ka sarreeya), natiijooyin wanaagsan ayaa la helay xilliyada 20, ee macaamil ganacsi muddo-dheer ah, ugu yaraan 60 ayaa lagula talinayaa. Ganacsi maalmeedka ganacsiga ee lammaanaha ugu muhiimsan, ma beddeli kartid heerarka caadiga ah ee 14, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la aqoonsado jiritaanka isbeddel, oo aan keligiis lagu sameyn karin oscillators-xaqiijin dheeri ah ayaa loo baahan yahay, tusaale ahaan, ka guurista Celcelis.
Tilmaamaha CCI oo ah isha ishaaradeed ee ganacsiga
Fasiraadda aasaasiga ah waxay la mid tahay dhammaan oscillators-yada kale ee farsamada: dhammaan dhaqdhaqaaqyada u dhexeeya +/- 100 waxaa loo tixgelin doonaa dhaqdhaqaaqyada suuqyada aan kala sooca lahayn ee aan u qalmin dareenka ganacsadaha. Marka jaantusku u socdo aagagga ba'an ee ka baxsan xadka, waxaad bilaabi kartaa inaad raadsato calaamadaha ganacsiga .
Calaamadaha aasaasiga ah ee bilaashka ah :
Fur ikhtiyaarka CALL-ikhtiyaarka ah marka shaxda CCI ay ka gudubto heerka "-100" kor - ka baxa aagga kormeerka;
Iyadoo la raacayo, waxaan fureynaa 'PUT-option' markii ay jirtay isgoys xagga kore ah oo heerka "+100" ah - oo looga baxayay aagga lagu iibsaday;
Dib u noqoshada ayaa dhakhso badan haddii +/- 200 Khadadka la tallaabo.
Kuwa bilowga ah ee ganacsiga 'crypto' waxaa lagula talinayaa inay sugaan xaqiijin dheeraad ah oo ah qaabka looga gudbayo heerka eber ka dibna kaliya la furo ganacsi .
Qoraagu wuxuu kugula talinayaa xiritaanka jagooyinka marka tilmaamuhu hoos ugu noqdo gadaal iibsiga, kor u kaca iibinta. Mar labaad, qaabkani waa mid la aqbali karo suuqa mustaqbalka ama uguyaraan macaamil-ganacsi dhexdhexaad ah. Waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee kacsan, waxaa fiican in la raaco maareynta lacagta taxaddar leh oo lagu xiro ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah haddii dillaaliyuhu u oggolaado marka tilmaamuhu "dul wareegayo" qiimayaasha ba'an ama u dhow khadadka eber.
Adeegga calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu u adeegsan karaa CCI inuu yahay shaandhaynta la isku daro ee guud Tusaale ahaan, way fiicantahay in laga boodo CALL-xulashada markii xariiqa tilmaamuhu jabo ama soo dhawaado +200 - kor u kaca ayaa ku dhowaaday inuu dhamaado wuxuuna isu diyaarinayaa dib u noqosho. Sidoo kale, ma raadineyno dhibco loogu talagalay PUT-ikhtiyaar markii "hoose" ee -200 la gaaro oo isbeddelka culeyska uu dhammaado. Xaaladda kor u kaca joogtada ah ama hoos u dhaca heerarka eber, waxaad isku dayi kartaa inaad ku darto meel faa'iido leh ama aad u furto mid cusub jihada isbeddelka.
Kaladuwanaanshaha dhaqdhaqaaqa jaantuska qiimaha iyo tilmaame (kala duwanaanta) ayaa sidoo kale noqon doona calaamad xoog leh. Sidoo kale burburka khadadka isbeddelka ee salka ku haya max iyo min isku xigxig: burburka kor u kaca - meelaha laga soo galo BUY, burburka hoos u dhaca - Iibso iib.
Tusaha Badeecada Badeecadu wuxuu muujinayaa saamiga xoogga iyo xawaaraha isbedelka socda. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee calaamadaha dib-u-celinta bilaashka ah waxay si fiican uga shaqeeyaan waqtiyada laga soo bilaabo H1 iyo wixii ka sarreeya, laguma talinayo in laga ganacsado xilliyada yar yar ee bilowga ah sababtoo ah qaddarka badan ee suuqa "buuq". Sidoo kale waa inaad ka waantowdaa inaad u isticmaasho xilliyada mala awaalka iyo wararka marka qulqulka xaddiga mugga ee muddo gaaban gudahood "uu jebiyo" caqliga oscillators-ka.
Marka hore, aan aragno sida loo isticmaalo tilmaame CCI iyadoo la raacayo xeerarka istiraatiijiyadda caanka ah ee Woodie. Histogaraam laba-midab leh marka loo eego mabda 'MACD, joogitaanka "gaabis" iyo "dhakhso" CCI oo u shaqeynaya sida isgoyska Celceliska Dhaqdhaqaaqa oo kordhiya tirada iyo tayada calaamadaha binary ee bilaashka ah .
Lammaanaha lacagta iyo cryptocurrencies, calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee dhabta ah ayaa laga helaa isku dhafka caadiga ah ee " CCI oscillator + tilmaamayaasha isbeddelka + oscillators dheeraad ah ". Xaaladeena, kani waa Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sahlan iyo MACD.
Haddii dallaalku bixiyo si uu u xiro ikhtiyaarka ka hor intaanu dhicin, waan sameynaa (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Marka calaamadaha ganacsiga ee ka soo horjeedka ahi ay soo baxaan: soo noqnoqoshada is-dhaafsiga ee Celceliska Dhaqdhaqaaqa oo leh isbeddel deg deg ah ama qaraabo ah jihada histogaraam MACD .
In kasta oo tirakoob wanaagsan iyo jawaab celin laga helayo qolka ganacsiga ee nool ee Forex , ha ilaawin in dejintu markii hore loo sameeyay suuqa meertada ah ee saamiyada iyo mustaqbalka, halkaasoo xilliyada caadiga ah ee isbeddelada sicirka ee ugu badnaan illaa ugu yar si fudud loo go'aaminayo. Hantida kacsan, tan macnaheedu waa inaad u baahan tahay ugu yaraan hal xaqiijin dheeri ah oo ah qalabka isbeddelka iyo oscillators ee xisaabiya habdhaqanka suuqa iyadoo la adeegsanayo habab kale.
Maaddaama wareegyada suuqa ay dhif tahay in laga helo shaxda qaabka caadiga ah (Elliott moodooyinka mawjadaha, saxitaanka ka shaqeynta qaababka dib u noqoshada garaafka, iyo kuwa kale), dejinta tilmaamaha CCI wuxuu isu beddelayaa hawl adag, tijaabada taariikhiga ah wax yar ayey falanqeyneysaa xaaladda hadda jirta. .
Waxaad u baahan tahay inaad xakameyso xaaladda suuqa ee hadda jirta, laakiin sida loo isticmaalo guud ahaan calaamadaha gawaarida waaweyn, eeg sida tilmaamaha CCI uu u shaqeynayo xilliyada 9-50, waqtiyada laga helo H1. Haddii aad khibrad u leedahay maqnaanshaha fikirka, xulashooyinka muddada-gaaban ee M5-M30 waa la aqbali karaa.